January 2014 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
ဗိုလ် လှိုင်း at 11:53:00 PM 4
Android ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာဖောင့် ထဲ့သွင်းမှုနည်းလမ်းများကို ရေးသားထားတဲ့
စာအုပ်လေးပါ ဝါသနာအရ လေ့လာချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ ကလိချင်တဲ့ ဘော်ဘော်များ
ဗိုလ် လှိုင်း at 11:25:00 PM 2
HUAWEI ဖုန်းတော်တော်များများ အပေါ်ကပုံလေးလိုပဲ မြန်မာဖောင့် မမှန်တဲ့ အခက်ိခဲလေးတွေ
တော်တော်များများ ကြုံတွေနေရပါတယ် သူငယ်ချင်းတို့ဖုန်းတွေမှာ
မြန်မာမှန်မမှန် သိချင်ရင်တော့ သတင်ဆိုဒ်တွေမှာ ဝင်ဖတ်ကြည့်ပါ TZ သတင်းဆိုဒ်မှာ
မြန်မာစာ အမှန်တာအဖြစ်များပါတယ် ဖြေရှင်းဖို့အတွက် အောက်မှာ လိုအပ်တဲ့
အောက်ကပုံလေးအတိုင်း ဆက်လုပ်သွားလိုက်ပါ
ဒီအဆင့်ထိရောက်ရင်တော့ ဖုန်းမှာ Root Expolorer ဆော့ဝဲလေးကို install လုပ်ပြီး
ဖွင့်လိုက်ပါ Allow ပေးလိုက်ပါ အောက်ကပုံလေးအတိုင်း ဆက်လုပ်သွားလိုက်ပါ
system ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ အထဲမှာ font /ect ဆိုတာကိုရှာပါ font ကိုဖွင့်ပြီးတော့ sanpya.ttf ဆိုတာကို
ထဲ့ပေးလိုက်ပါ ect ထဲမှာတော့ နောက်တစ်ပိုင်ထဲ့လိုက်ပါ
မြန်မာစာ အမှန်ပေါ်သွားပါလိမ့်မယ် မမှန်ရင်တော့ သူငယ်ချင်း လုပ်ဆောင်ချက်လို အပ်နေတာ
ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် စက် Restart ချပြီး ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ ပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းပြထားတာကြောင့်
မှားလိမ့်မယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူးနော် လိုအပ်ချက်ရှိရင် နားလည်ပေးပါ အခက်ခဲရှိနေရင်တော့
အမည်ကို ကလစ်ပြီးလဲ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3D Design Software Design ဆော့ဖ်ဝဲများ
CSI Bridge 2014 v16.1.0 Full Version
Maung Pauk at 11:17:00 PM 0
လမ်း/တံတားတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် Design ထုတ်ရာမှာသုံးပြီး Civil Engineer တွေအတွက် အသုံးဝင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်... Auto CAD လို လူသိသိပ်မများပေမယ့် ဒီကောင်ကို သုံးဖူးသူတွေကတော့ လွယ်ကူပြီး ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုပါတယ်..
Witha64 bit operating system, the SAPFire® Analytical Engine can utilize more than4GB of RAM, making it possible to more efficiently solve larger problems.
Download : 405.7 MB
Thanks Blogger Koyan
e-books Focus Online Magazine
Focus Online မဂ္ဂဇင်း Vol 18 Issue 76
Maung Pauk at 11:14:00 PM 0
Design Photoshop ဆော့ဖ်ဝဲများ
Adobe Photoshop Lightroom 5.3 RC1 Full
Maung Pauk at 10:40:00 PM 0
Download : 402.8 MB
Myanmar IT Helper at 10:36:00 PM 0
ဒီပိုစ့်ကိုဖတ်နေတဲ့သူ တတော်များများကို ကျနော် တစ်ခုမေးချင်လို့ပါ ငယ်ငယ်လေးတုန်းက အနည်းဆုံးစွန်တော့ ခေါက်ဖူးမယ်ထင်ပါတယ် ကျနော်တို့ငယ်ငယ် လေးကတည်းက စက္ကူခေါက်တာနဲ့ မစိမ်းပါဘူး ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း ဝါသနာပါပါတယ် မှတ်မှတ်ရရ ငါးတန်းနှစ်တုန်းက လှေနှစ်ဘတ်တွဲတာကို မခေါက်တက်လို့ ခြောက်တန်းခန်းထဲသွားပြီး သူများကိုခေါက်ပြခိုင်းတာ အခုထိမှတ်မိသေးပါတယ် စာအုပ်တစ်အုပ်ပြန်ပြီး တော့ဝေမျှချင်ပါတယ်
ဝါသနာပါတဲ့ သူအတွက်တော့ ရွှေပေါ့ဗျာ သုံးရာကျော်ဆိုတော့ခေါက်စမ်းပါလေ့ ခေါက်လို့တောင်မကုန် နိုင်ဘူး တတော် ခေါက်ယူရမှာ မိုက်တယ်နော် ကျနော်လည်းကျောင်းအားရက်တိုင်း တစ်ခုချင်းစီ ခေါက်ကြည့်ဦးမယ် ဒီနေ့တောင်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကိုပေးလိုက်တော့ စော်ကိုခေါက်ပေးမယ်ဆိုလားပဲ ကြိမ်းသွားသေးတယ် ဘယ်လိုအသုံးချချပေ့ါဗျာ ဝါသနာမပါလည်းခေါက်ကြည့်ပေ့ါအနည်းဆုံးတော့အပျင်းပြေတာပေ့ါ
(ဒီပိုစ့်ကို တင်ချင်လွန်းလို့ အင်တာနက် ဆိုင်အထိလာတင်တာပါ ကျနော်အင်တာနက်လိုင်း(ဖုန်းလိုင်း)စုတ်နေလို့ ဘလော့ ပိုစ့်အသစ်မတက်နိုင်တာကြာပါပြီ စာအုပ်ကလည်း စက်ထဲမှာ ဖွရင်းတွေ့လာလို့ပါ)
HitmanPro 3.7.9 Build 212 (x86/x64) Full
Maung Pauk at 10:15:00 PM 0
HitmanPro ဆိုတာက Windows PC တွေအတွက် Virus, Trojan, Rookit, Spywar, Malware စတဲ့ ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်တွေကို ရှင်းလင်းပေးရုံမက မူလ Software တွေကိုလည်း ပြန်ပြီး အကောင်းဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပေးတဲ့ antivirus အမျိုးအစားတစ်မျိုးပါ. ဈေးနှုန်းက 29.95 ဒေါ်လာ ဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်ဆီမှာ အလကားယူပေါ့..
Changes in 3.7.9 Build 212:
Download For 32bit(x86)
Download For 64bit(x64)
Maung Pauk at 9:40:00 PM 0
Credit : ခေတ်လူငယ်
IT Knowledge Phone Application နည်းလမ်းများ
Maung Pauk at 9:24:00 PM 0
GiliSoft USB Lock 4.1.0 Full
Maung Pauk at 9:17:00 PM 0
မိမိကွန်ပျူတာဆီကနေ Data ကူးယူမှုဟူသမျကို တားဆီးနိုင်တဲ့ GiliSoft USB Lock ဖြစ်ပါတယ်... ဒါ့အပြင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံရေးစနစ်အတွက် ပိတ်ပင်ထားနိုင်တဲ့ function တွေလည်းစုံပါတယ်.. သူ့ရဲ့ Feature အချုပ်ကိုပြောရရင်-
စသည်ဖြင့် လုံခြုံရေး အကုန်လုံးကိုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် Personal Data ကိုလုံခြုံစေမယ့် Software ကောင်းလေး တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်...
Maung Pauk at 8:47:00 PM 0
Source : ခေတ်လူငယ်
Helicon Filter v5.2.7.2 Full
Maung Pauk at 2:50:00 PM 0
ဓါတ်ပုံ Editing လုပ်တဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်..
Helicon Filter v5.2.7.2
Helicon Filter isaprogram for image editing. Here you can do basic things such as cropping, resizing, correcting brightness and contrast, adjusting the white balance, and sharpening, etc., in just few clicks. But Helicon Filter offers more than just basic operations: it also includes many advanced features. Read about all the features here.
Helicon Filter has tools for all tastes. You'll easily master the enjoyable art of retouching, with our full set of brushes and real-time preview. And you'll find it easy to make your images memorable by creating interesting effects and adding frames and text.
Using Helicon Filter, editing is non-destructive and implemented via "filters." The "filters" are layered over the original photo and can be undone and reapplied at any moment and in any sequence. Even if you reopenaphoto in Helicon Filter, you can load previously applied filters and edit them.
Flexible resizing options You can set the number of pixels (or mm, cm, or inches) on the sides of an image or you can resize the image by percent.
Manual contrast adjustment You can set the "black point" and "white point" to make the "blacks" more black and the "whites" more white.
See More >> http://www.heliconsoft.com/helicon-filter-features/
What's New (30.01.2014)
After trial period Helicon Filter switches to fully functional ad-supported mode
New version of Helicon Import is included into Helicon Filter installation
( www.maungpauk.org )
Download : 285.7 MB
Thanks Blogger Ko Yan
Maung Pauk at 2:34:00 PM 0
NEWS Website အညွှန်း
လတ်ဆတ်သောသတင်း၊ စုံလင်သော ကဏ္ဍများနဲ့ www.thefreenote.com အသက်ပြန်ဝင်လာ
Maung Pauk at 1:30:00 AM 0
လွန်ခဲ့သောလပိုင်းက တည်ထောင်ထားခဲ့သော www.thefreenote.com ( လွတ်လပ်သော သတင်းမှတ်စု ) ဆိုဒ်မှာ အခက်အခဲအချို့ကြောင့် ရပ်နားထားခဲ့ရာမှာ Template Design နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းပေးပြီးနောက် ပြန်လည်အသက်ဝင်လာခဲ့သည်။
မြန်ဆန်တိကျသောသတင်း၊ သုတ၊ ရသစုံကဏ္ဍတို့ဖြင့် ဝေဝေဆာဆာ ပြန်လည် ရေးသားနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ လာရောက်ရမည့်လိပ်စာမှာ www.thefreenote.com ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
အင်တာနက် ၅ မိနစ်ဖွင့်ရုံဖြင့် ဖုန်းမှတစ်ဆင့် သတင်းများဖတ်ရှုလိုပါက အောက်တွင် ဖုန်း apk ကို ရယူနိုင်ပါပြီ...
Download The Free Note Apk
Admin : The Free Note
IT NEWS Samsung
Samsung ၏နောက်ထွက်မည့် စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်များနံပါတ်များအတည်ပြု
မောင်ပေါက် at 9:58:00 PM 0
Samsung ၏နောက်ထွက်မည့် စမတ်ဖုန်းအတွက် မော်ဒယ်နံပါတ်များအတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး SM-G900 ဆိုသောမော်ဒယ်နံပါတ်များဖြင့်သုံးစွဲသွားမည်ဖြစ်သည်။
ထပ်မံထွက်ရှိမည့် Samsung စမတ်ဖုန်းမှာ S5 ဖြစ်နိုင်ပြီး အဆိုပါမော်ဒယ်နံပါတ်များ၏ နောက်ဆုံးစာလုံးများဖြင့် စမတ်ဖုန်းများကို ခွဲခြားသွားမည်ဖြစ်သည်။
AT&T နှင့် Verizon မိုဘိုင်းအော်ပရေတာများအတွက် SM-G900A နှင့် SM-G900V တို့ဖြစ်ပြီး ဥရောပနှင့် နိုင်ငံတကာ အတွက် SM-G900F နှင့် SM-G900S တို့ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
Galaxy S5 သို့မဟုတ် မော်ဒယ်နံပါတ် SM-900 ၏ အခြားသောမော်ဒယ်များမှာ
Nyein Chan (TSJ Team) : Tech Space Journal
Facebook Security Tools နည်းလမ်းများ
အခြေခံ Facebook Account လုံခြုံရေး
Maung Pauk at 2:13:00 PM 2
မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေများ။ဒီပို့စ်ကိုကျနော်အကျယ်တဝင့်နှစ်ခါရေးဖူးပါတယ်။ကြာပြီဆိုတော့ပို့စ်အဟောင်းက ပြန်ရှာလို့မရတော့ဘူး။ဒီတော့ အသစ်ပဲပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။အကျဉ်းချုံးပေါ့။တတ်သမျှ မှတ်သမျှ နဲ့ ပညာရှင်တွေပြောပြသမျှ လေးပါ။ကျနော်ပညာရှင်မဟုတ်ပါဘူး။တတ်သမျှလက်ဆင့်ကမ်းပေးတာပါ။အခုတလော ကျနော့်မိတ်ဆွေတွေရဲ့FB အကောင့်တွေပျက်လာတာများလာတယ်။လော့ကျတာ ဟတ်ခံထိတာ များလာတယ်။အကောင့်ပျက်တာနဲ့လော့ကျတာက ရှင်းရှင်းပြောရ ရင် ကိုယ်တိုင်မသိ မတတ်တာတွေရှိလို့ပါ။Hack ခံထိတာက ယုတ်မာခံရတာပါ။ ဒီတော့ကာ ဒီပြသနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ ကာကွယ်ဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးပါမယ်
ဘယ်နည်းနဲ့ပဲပျက်ပျက် ပျောက်ပျောက် အဓိကကျတာက Fb ဖွင့်ရာမှာ သုံးတဲ့ Email ပဲ။ email ဆိုတာ ဥပမာ abcdefg123@gmail.com ဒါမှမဟုတ် gjcsryuudhnid6678@hotmail.com စသဖြင့် @email.com ပါတာကိုဆိုပါတယ်။ကနဦး Facebook user တွေသိပ်နားမ လည်ဘူးဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ Gmail ပဲအသုံးများပြီး hotmail နဲ့ yahoo က ဒုတိယလိုက်ပါတယ်။ကျန်တာတွေသုံးတာ သိပ်မတွေ့ရသလောက်ပါ။ထားတော့။အဲ့ဒီ Email ဟာ Fb မှာအရေးအကြီးဆုံးပဲ။Facebook မှာ အကောင့်ဖွင့်ရင် အီးမေးတစ်ခုက facebook ကိုပြရတယ်။အဲ့ဒီ email ကိုပဲ Facebook က ပြသနာရှိသမျှ စုံစမ်းလိုသမျှ မေးလိုသမျှ မေးခွန်းတွေပို့တယ်။အကောင့်တွေပျက်တာက Facebook က ကိုယ်တိုင်အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်တာ အတော်ရှားတယ်။Report တင်ခံရတာမျိုးပေါ့။ဒါလည်းမေးပို့တာပါပဲ။ပိုင်ရှင်သိအောင်ပေါ့။အကောင့်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ဖျက်မှပဲ ဖျက်တာက များပါတယ်။
၁ ။အဲ့ဒီတော့ Facebook မှာသုံးတဲ့ email address ကို ကိုယ်တစ်ယောက်သာသိပါစေ။ gtalk လို ပြောချင်ရင် အခြားEmail တစ်ခု ထပ်ဖောက်ပြီးသုံးပါ။ Fb မှာသုံးတဲ့ အီးမေးကိုတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှပေးမသိပါနဲ့။အရေးကြီးပါတယ်။သိပြီးသွားပြီဆိုရင် Facebook မှာသုံးတဲ့ email ကိုပြန်ချိန်းပါ ။ချိန်းနည်းကို အပိုဒ်တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြောပေး ပါမယ်။
၂ ။ Facebook password ကိုရော အခုနတင်ပြခဲ့တဲ့ fb မှာသုံးတဲ့ email ရဲ့ password ကိုရော မြန်မာလိုပဲပေးပါ မှတ်မိလွယ်တဲ့စာကြောင်း တစ်ခုနဲ့ပေးပါ။ဥပမာ ပြညါသာယာအေးချမ်းမှတိုးတက်ပါမယ် ကျနော်ကားပဲခူးသားဖြစ်၏ ကျနော့်ချစ်သူမှာကျနော်အချစ်ဆုံးသာဖြစ်၏ စသဖြင့်ပေါ့ အဲ့ဒီလိုပေး။ password ဖော်တာက keylogger နဲ့ဖော်တယ် gmail password hacker နဲ့ gmail password မှန်သမျှပေါ်တယ် အခု ၂၀၁၂ နောက်ပိုင်း keylogger တချို့ဆို စပေ့ဘားတို့ symbol တို့ ဥပမာ $&:"'/.:&'=(37'% ဒါတွေပါ ဖော်လို့ရလာတယ် ဒါပေမဲ့ မြန်မာဖောင့်ကိုဖော်နိုင်တဲ့ keylogger သိရသလောက်မပေါ်သေးဘူး ။ပညာရှင်ကြီးတွေဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့မြန်မာလိုပေးတာသည် လက်ရှိစိတ်အချရဆုံးပါပဲ။hack ဖို့လုံးဝ လုံးဝမလွယ်ပါ ။password မှန်ရင်မြန်မာလိုသာပေးပါ။ဒါပေမဲ့ မှတ်မိဖို့ လုံးဝမလွဲဖို့တော့အရေးကြီးတယ်။
၃ ။ Facebook မှာ ဒီနေ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီအကောင့်ကိုသုံးပြီး နောက်တနေ့စင်္ကာပူမှာသုံးပြီးဆိုရင် location ကွာခြားမှုကြောင့် မေးခွန်းတွေမေးလာတတ်ပါတယ်။ဒါလည်းနည်းသိသူအဖို့ သိပ်ပြသနာမရှိပါဘူး။fb မှာသုံးတဲ့ email ကိုပဲ မေးတွေ link တွေပို့တာမို့ ကိုယ်သုံးတဲ့email ကိုယ့်လက်ထဲရှိနေသရွေ့ မပူရပါဘူး။အဲ အီးမေး password မမှတ်မိရင်တော့ ပြသနာရှိပါတယ်။
၄ ။ password တွေသူများနောက်ပါတာ အများအားဖြင့် သူများဆိုင်မှာ သုံးတဲ့လူတွေများတယ်။ဂရုစိုက်ပါလို့ပဲ မှာနိုင်ပါမယ်။system unit ပုံးနောက်မှာ သံသယဝင်စရာ အပိုတစ်ခုခု တွေ့မြင်နေကျမဟုတ်ပဲရှိနေရင် သတိပြုပါ ။task manager ခေါ်ပြီးစစ်ကြည့်လို့ malware တွေ spyware တွေရှိနေရင်လည်း မသုံးသင့်ဘူး။ဒီsoftware တွေနဲ့ပတ်သတ်လို့ ကျနော်လည်းမကျွမ်းကျင်ပါဘူး။ဒါ့ကြောင့် အကောင်းဆုံးအကြံပြုချင်တာ ကတော့ ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ကိုယ် ကိုယ့်စက်နဲ့ကိုယ်က စိတ်အချရဆုံးပါ ။ဆိုင်မှာသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း လုံးဝကိုယ်စိတ်ချရတဲ့အတွင်းသိ အစင်းသိဆိုင်မျိုးမှာပဲသုံးပါ။
၅ ။ facebook မှာ ကြော်ငြာတွေ link တွေအများကြီးပေးတတ်ပါတယ်။ link တွေ့တိုင်း လျှောက်မနှိပ်ပါနဲ့ လိုက်မဝင်ပါနဲ့ တခါတလေမှာ အဲ့ဒီlink တွေက ထောင်ချောက်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။သတိပြုပါ။ username တွေ password တွေတောင်းလာရင်လည်း ကိုယ် broswer ကနေဝင်တာမှန်တယ်ဆိုရင်ထပ်မပေးပါနဲ့ အယောင်ဆောင်Facebook page တွေအများကြီးရှိတယ်။ အသာလေးကိုယ့်အကောင့်ကိုမသွားလိမ့်မယ်။ကိုယ်မသိတဲ့ မသေချာတဲ့ link ဆိုရင် လိုက်မဝင်တာ စိတိအချရဆုံးပါပဲ။ ပါသွားရင်တော့ ကျနော်ကနဦးပြောတဲ့ email ကနေပဲပြန်လိုက်ရမှာပဲ။ email ပါမရှိတော့ရင်တော့ ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါဘူး။
၆ ။ ကိုယ့်အကောင့် report တင်ခံထိရင် ခင်မင်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုအကူအညီတောင်းပါ။တခြားကိုယ်မသိတဲ့ friend မဟုတ်တဲ့ လူတွေကို ကိုယ့်အကောင့်ဆီ add ခိုင်းပါ။add တာများလာရင် report ကို facebook ကမစဉ်းစားတော့ဘူး။အဲ post တွေ report ထိတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီပို့စ်ကိုဖျက်ပါ။မဖျက်ရင် အကောင့်မှာ အန္တရယ်ရှိတယ်။report တွေများလာရင်တော့ အကောင့်တော့ပျက်ဖို့နီးနေပြီမှတ်ပါ။post ကိုမဖျက်ချင်ရင်တော့ သူငယ်ချင်းတွေကို အကူအညီတောင်းပြီး like လုပ်ခိုင်း share လုပ်ခိုင်းပါ ။များလာရင် အဲ့ဒီ report တွေက ပျက်ပျယ်တယ် ။မစဉ်းစားတော့ဘူး။
၇ ။ ဒါက Nationalism fighter တွေအတွက်ပါ ။ ပြိုင်ဘက်တွေ ရန်သူတွေရဲ့ page တွေက ban တာခံရ ရင် တခြားအကောင့်သစ်တွေနဲ့like လုပ် ထပ်ဝင်ပြီးတွယ်ပါ။အရင်လူမှန်းတော့မသိစေနဲ့ပေါ့။အခုက ban ခံလိုက်ရတာနဲ့ဆက်မဖိုတ်တော့ဘူး။ တခြားအကောင့်နဲ့တွယ်ပါ။ထပ်ban ရင် တခြားအကောင့်တစ်ခုနဲ့ထပ်တွယ်ပါ ။ဒါက အကြံပေးတာပါ။
၈ ။ ကိုယ့်ဝေါကိုယ်သွားပါ။about ဆိုတဲ့အကွက်တစ်ကွက်ရှိတယ် ။နှိပ်ပြီးဝင်ပါ။အဲ့ဒီမှာ contact info ဆိုတာကို ထပ်နှိပ်ဝင်ပါ။အကောင့်ဖွင့်တုန်းက ပေးထားသမျှ ထပ်ပြီးသွင်းထားသမျှ အချက်အလက်တွေ ဥပမာ ဖုန်းနံပါတ် လိပ်စာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ စတာတွေတွေ့ရမယ်။ အကုန် သော့လိုက်ခတ်ပါ။သော့ခတ်နည်းက ဆိုင်ရာ box ကလေးတွေရဲ့ညာဘက် အပေါ်ဒေါင့်မှာ ကမ္ဘာလုံးပုံ(public) တွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကို only me (သော့ခလောက်) ပုံစံပြောင်းပါ။အဲ့ဒီတစ်မျက်နှာလုံး ခတ်နိုင်သမျှအချက်အလက်တွေလိုက်ခတ်ပါ။အဲ့ဒီအချက်တွေက သူများမသိလေကောင်းလေပဲ။
၉ ။ အဲ့ဒီ contact info စာမျက်နှာမှာဖုန်းနံပါတ် box ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကိုထပ်ဝင်ပါ။Add gmail ဆိုတဲ့box ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီbox မှာ ကိုယ်မသုံးတဲ့gmail အသစ်တစ်ခုကို ပေါင်းပါ။ တတ်နိုင်ရင် နှစ်ခုပေါင်းပါ။ ဒါဆို အကောင့်ခိုင်မာမှုအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ပထမသုံးထားတဲ့email အခိုးခံရ ရင်တောင် ဒုတိယမေး တတိယမေးနဲ့ပြန်လိုက်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲ Facebook မှာသုံးတဲ့ email ကို အခြားကိုယ်ထားချင်တဲ့ email နဲ့ပြန်ချိန်းထားခဲ့ပါ။box တစ်ခုထဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ ။ facebook မှာ friend request ပို့တိုင်းမကောင်းဘူး။ request ပို့တာများလာရင် တစ်လလောက် request အပိတ်ခံရတတ်တယ်။like လုပ်ကောင်းတိုင်းမလုပ်ပါနဲ့။တအားများသွားရင် like အပိတ်ခံရတတ်တယ်။မသုံးပဲ ပစ်မထားနဲ့။၃ လကျော်ရင် အကောင့်အဖျက်ခံရတတ်တယ်။ဆိုင်တွေမှာသုံးချိန် password ကိုမေ့မကျန်ခဲ့စေနဲ့။သေသေချာချာ sign out လုပ်။အကောင့်တစ်ခုတည်းကို နေရာနှစ်ခုက တပြိုင်နက် မသုံးမိစေနဲ့။အကောင့်သစ်ဖွင့်ရာမှာ securtiy question တွေအကုန်ဖြည့်။မေးသမျှ တတ်နိုင်သမျှဖြေ။မပျင်းနဲ့။skip မလုပ်နဲ့။အဲ့ဒီအချက်ဟာ အကောင့်ခိုင်မာမှုအတွက် အထာက်အကူပြုတယ်။
၁၁ ။ account setting မှာ security ဆိုတာရှိတယ်။sequrity question သက်မှတ်ထား။ အဲ့ဒီ မှာ trusted friend သတ်မှတ်ထား။အပြင်မှာသိတဲ့ အလွယ်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုပဲထား။၃ ယောက်ကနေ ၅ ယောက်အထိထားရတယ်။အကောင့်hack ခံရ ရင် ကိုယ်က facebook ကို အကြောင်းကြားတာနဲ့ code တွေကို အဲ့ဒီ friend တွေဆီပို့ပေးလိမ့်မယ်။ပြန်တောင်းပြီးမေးလာရင်ဖြည့်ပေးရတယ်။ကိုယ်နဲ့စကားပြောဖူးတဲ့ ရင်းနှီးဖူးတဲ့လူတွေရဲ့ profile ပုံတွေတတ်နိုင်သမျှမှတ်ထား ။နာမည်တွေလည်းတတ်နိုင်သမျှမှတ်ထား။အကောင့်Hack ခံရတဲ့အခါ facebook က ပြန်ရွေးခိုင်းတတ်တယ်။်
ကဲ ကျနော့်ရဲ့ မိတ်ဆွေများ ကျနော်လည်းခနခနhack ခံထိဖူးလို့ ပညာရှင်တွေလိုက်မေးရင်းနဲ့သိလာတာပါ။အထက်ကဟာမှန်သမျှကို လုပ်ရင်း လုပ်ရင်း အကောင့်က မာသည်ထက်မာလာတာပါ။လုံခြုံသည်ထက်လုံခြုံလာတာပါ။ကျနော်တင်ပြသမျှကိုသာ မချွင်းမချန်လုပ်ရင် ဂရုစိုက်ရင် ၉၀ % ထိအာမခံပါတယ်။လုံခြုံပါလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့ ၁၀ %က ပညာရှင်စစ်စစ်တွေပေါ့။ Hack ခံထိရင်လည်း emailသာ လက်ထဲရှိပါစေ။ပြန်ယူနိုင်ပါတယ်။ ယူသွားနိုင်လည်းခနပါပဲ။
National Myanmar Youths
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှ အောရီဒူးအားဆက်သွယ်ရေးလိုင်စင်ပေးအပ်
Maung Pauk at 1:10:00 PM 0
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာမှ Ooredoo Myanmar အား Telecom License ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို နေပြည်တော်ရှိ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနတွင် ယနေ့နံနက် ၉နာရီကကျင်းပခဲ့သည်။
ယင်းအခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း၊ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ၊ Ooredoo Company မှ ဥက္ကဌဖြစ်သူ H.E. Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Than, Ooredoo ၏ Group Chief Operation Officer Dr . Nasser , Chairman of Ooredoo Myanmar Aziz Aluthman Fahroo Dr.Lin, U Hla Thein ,Ooredoo Myanmar ၏ CEO Ross Cormanck, COO Chris Bannister, Group Chief Strategy Officer Jeremy Sell, Chief Strategy Officier Nick Swierzy , Ooredoo Asia ၏ General Counsel Scott Weenink, Launch director Roary Stasko , Chief Marketing Officer Loma Mcpherson နှင့် မီဒီယာအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ယင်းအခမ်းအနားတွင် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြတ်ဟိန်းမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး နောက် Ooredoo Company မှ ဥက္ကဌဖြစ်သူ H.E Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani မှမိန့်ခွန်းပြောခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခင်မောင်သက်နှင့် Ooredoo Company မှ ဥက္ကဌဖြစ်သူ H.E. Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani တို့ ဆက်သွယ်ရေးလိုင်စင်နှင့်ပတ်သက်သော စာရွက်စာတမ်းများအားလက်မှတ်ရေးကာ Ooredoo Myanmar မှ CEO Ross Cormack မှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီး အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။
တယ်လီနော မြန်မာအတွက် အလားတူဆက်သွယ်ရေးလိုင်စင်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို လာမည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့(၅-ဖေဖော်ဝါရီ-၂၀၁၄)တွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
Ref : Today Myanmar
ကမ္ဘာ့အပါးလွှာဆုံး ဖုန်း ဖြစ်လာနိုင်သည့် iPhone 6
Apple ကုမ္ပဏီ မှ တရားဝင် သတင်းထုတ်ဖော် မကြေငြာသေးသော်လည်း အလွန်ပါးလွှာသည့် iPad Air Tablet ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးသည့် နောက်တွင် အနာဂတ် အိုင်ဖုန်း များ၏ ကိုယ်ထည်များသည်လည်း အလွန် ပါးလွှာသော ကိုယ်ထည်များ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း သတင်းများက ဆိုပါသည်။
ထို့အတွက် ယခု နောက်ဆုံး ထုတ်လုပ်မည့် iPhone6သည် iPhone မျိုးဆက်များထဲတွင် အပါးလွှာဆုံး ဖြစ်လာဖွယ် ရှိနေသည် ဟု ဒေးလီးမေးလ် သတင်းစာ မှ ခန့်မှန်းပြောကြားထားပါသည်။ အတည်ပြုချက် မရသေးသော သတင်းများအရ iPhone6၏ ဒီဇိုင်း ပုံ ဟု ယူဆရသည့် ဓာတ်ပုံတစ်ခု
အင်တာနက်တွင် ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဓါတ်ပုံအရ ဖုန်း၏ ကိုယ်ထည်သည် သုံး မီလီမီတာ မျှသာ ထူထဲကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသဖြင့် ကမ္ဘာကျော် Apple ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် iPhone ၏ လာမည့် မျိုးဆက်အသစ် ကို ထုတ်လုပ်
ရောင်းချရာတွင် ကိုယ်ထည် ပါးလွှာပေါ့ပါးမှုကို အသားပေး တည်ဆောက်လာနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိနေကြောင်း နည်းပညာ ဘလော့များနှင့် ၀က်ဘ်ဆိုဒ် များက ဆိုခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။ Mashable နှင့် Techblog ကဲ့သို့ အချို့သော နည်းပညာ စာမျက်နှာများအရ မူ မျိူးဆက်သစ် အိုင်ဖုန်းသည် iPhone6ဟု အကြမ်းဖျင်း ခေါ်ဆိုနေကြသော်လည်း iPhone Air ဟူသော အမည်ဖြင့် ထွက်ပေါ်လာပါက ထူးဆန်းဖွယ်ရာ မရှိကြောင်း ရေးသားခဲ့ကြသည်။
လက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကိုယ်ထည်အပါးလွှာဆုံးဖုန်းမှာ Vivo X3 ဖြစ်ပြီး (၅.၇၅) မီလီမီတာ မျှသာ ရှိသည်။ ထုတ်လုပ်ပြီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သော iPhone 5S သည် မျိုးဆက်အိုင်ဖုန်းများတွင် ပါးလွှာမှု စံချိန်တင်ခဲ့ပြီး (၇.၆) မီလီမီတာ ထူထဲပြီး iPad Air က (၇.၅) မီလီမီတာ အထူရှိကြောင်း သိရသည်။
နာမည်ကျော် မိုက်ခရိုဆော့ဖ် မြန်မာ့ပညာရေးကဏ္ဍ တွင် လေးနှစ် စီမံကိန်းဖြင့် ကူညီမည်
Maung Pauk at 10:33:00 AM 0
ဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့်အသေးစိတ် ညှိ နှိုင်းမှုများ ပြီးဆုံးပါက မိုက်ခရိုဆော့ဖ် အနေဖြင့် ပညာရေးကဏ္ဍတွင် လေးနှစ် စီမံကိန်းနှင့် ကူညီဆောင်ရွက်သွားမည် ဟု မိုက်ခရိုဆော့ဖ်မြန်မာပြည်ရုံးခွဲ Knowledge Centricity မှ သိရသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းအတွက် ပညာ ရေးဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့် စေ့စပ် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန်အတွက်ဝန်ကြီး ဌာနများ၏ တုံ့ပြန်မှုကို စောင့် ဆိုင်းနေရ ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အထက်ပါရုံးခွဲ၏ ဒုတိ ယဥက္ကဋ္ဌက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်အနေ ဖြင့် စီမံကိန်းအတွင်း လုပ်ဆောင် မည့် ပရောဂျက်များအား တင်ပြထားပြီး ယခု နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်ဟု သိရသည်။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏ပြည်တွင်း ပညာ ရေးကဏ္ဍအတွက် ဆောင် ရွက်မည့် လေးနှစ်တာစီမံကိန်း၌ အဓိကအနေဖြင့် နှစ်ပိုင်း ခွဲ ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကာ ဆရာ၊ ဆရာမများကို အိုင်တီနည်း ပညာနှင့် ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်လည်း ရည် ရွယ်ထားကြောင်း သိရသည်။
''ဆရာ၊ ဆရာမတွေက သိတယ်ဆို ပေမယ့် တချို့အရာတွေ က ခေတ်မမီ တော့ဘူး''ဟု မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရုံးခွဲ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌက နည်းပညာနှင့် ပတ် သက်၍ ပြောသည်။
ထို့အပြင် အိုင်တီနည်းပညာများ ပါဝင်မည့် ညွှန်းတမ်းများကို ပါ ပြောင်းလဲရေးဆွဲစေမည့် အချက်များ စီမံကိန်းအတွင်းပါဝင်မည်ဖြစ်ရာ ၄င်း မှာ အခြေခံပညာနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာ နှစ်မျိုးစလုံး အတွက် ဆောင် ရွက်သွား မည်ဟု သိရသည်။
Myanmar IT Sky at 1:47:00 AM 2
ဆရာဦးအုန်းမြင့် ရေးထားတဲ့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေရဲ့အကြောင်း
Antivirus Microsoft ဆော့ဖ်ဝဲများ
Microsoft Safety Scanner ( MSERT)
Maung Pauk at 7:15:00 PM 0
Windows ထုတ်လုပ်တဲ့ Microsoft Company ကပဲ သူ့ Windows အသုံးပြုသူတွေကို Virus အန္တရာယ်က ကင်းဝေးစေဖို့ စေတနာကောင်းနဲ့ Antivirus တွေကို ထုတ်လုပ်ပြီး အခမဲ့ပေးလေ့ရှိပါတယ်.. ခု Microsoft Safety Scanner ကိုလည်း အလကား ဖြန့်ဝေပေးထားပါတယ်.. PC အတွင်းမှာ ခိုအောင်းနေတဲ့ Virus, Spyware, Malware, Trojan တွေသာမက Web Browser တွေမှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ Virus, Spyware, Malware, Trojan တွေကိုပါ ရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်.
Download : 95.23 MB
Firmware Oppo Phone Application
OPPO Firmwares Download
Maung Pauk at 6:56:00 PM 0
OPPO Smart Phone နဲ့ Tablet တွေအတွက် Firmware တွေကို အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..
Baidu Root Tool v3.5.05
Maung Pauk at 6:08:00 PM 0
Android Smart Phone တွေကို Root တဲ့ Root Tool ပါ.. အချို့မိတ်ဆွေတွေသုံးပါတယ်.. တစ်ခါတစ်လေ ဘာ Root Tool နဲ့မှ မပေါက်တာကို ဒီကောင်နဲ့ ပေါက်တယ်.. ထူးတော့ထူးဆန်းတယ်ဗျ.. တစ်ခါတစ်လေကျတော့ Huawei သာမန်လောက်တောင် မပေါက်ချင်ဘူး.. မိတ်ဆွေများ လိုချင်ရင် ယူလို့ရအောင်လို့ပါ.
Baidu Baidu isakey root company launchedamobile version root cracking tools. It can help you:
1, safe and efficient access to phone the highest authority, there is no risk;
2, uninstall unnecessary system applications, freeing space on your phone;
3, protect your privacy, prevent malicious behavior bad software;
4, management boot items, to occupy the phone memory, frequent advertising push application says NO!
delete preset applications to free up storage space
thorough cleanup process, bid farewell to the phone Caton
monitoring malicious behavior, protection of privacy charges Baiduakey Root
Phone Application SONY နည်းလမ်းများ
Sony Flash Tool 0.9.11.0-window.exe Download & Flash Tool အသုံးပြုနည်း။
Ye Naing at 5:59:00 PM 0
Credit to - Aung Yi Swum
flashtool-0.9.11.0-windows.exe ကို install လုပ်ပါ...
C:\_Flashtool\_drivers ထဲတွင် Flashtool-drivers.exe ရှိပါသည်... ၄င်းကို install လုပ်ပါ...
Flashtool-drivers များကို install လုပ်ထားမှ Sony Xperia phone များ၏ fastboot နှင့် flash mode ကို သိရှိမည် ဖြစ်ပါတယ်...
C:\_Flashtool\_firmwares ထဲတွင် firmware ပြန်တင်မည့် "ftf" file များကို ထည့်ထားပါ...
ပြီးလျှင် flashtool ကို ဖွင့်ပါ...
မိုးကြိုးသွား ပုံလေးကို နှိပ်ပါ...
flashmode ကို ရွေးပြီး Ok ကို နှိုပ်ပါ...
Firmware ပြန်တင်မည့် device ကို ရွေးပြီး flash ကိုနှိပ်ပါ...
ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ထားပါ...ပြီးလျှင် ဖုန်းကို "volume down" or "back key" နှိပ်ပြီး computer နှင့် ချိတ်ပါ...
Firmware ရေးခြင်း ပြီးဆုံးပါက ဖုန်းကို ပါဝါ ပြန်ဖွင့်လျှင် အသစ်ရေးသားထားသော version နှင့် sony xperia ဖုန်းလေးကို တွေ့မြင်ရမှာပါ...
မှတ်ချက်။ ။ Firmware ပြန်တင်လျှင် ဖုန်းထဲမှ အချက်အလက် အားလုံး ပျောက်ဆုံးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်...
ထို့ကြောင့် firmware ပြန်မတင်ခင် management-tool-for-android-mobile လေးဖြင့် ဖုန်းထဲမှ data အားလုံးကို backup ယူထားစေချင်ပါသည်...
မူရင်း Post ကို ဒီနေရာမှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
Firmware ရေးဖို့ Sony flashmode key များ
Ye Naing at 5:58:00 PM 0
Credit to - Htoo Zaw
Xperia Z1 Volume down
Xperia ZUltra Volume down
Xperia C Volume down
Xperia M Volume down
Xperia ZR Volume down
Xperia L Volume down
Xperia SP Volume down
Xperia Z Volume down
Xperia ZL Volume down
Xperia E dual Volume down
Xperia E Volume down
Xperia T LTE Volume down
Xperia V Volume down
Xperia J Volume down
Xperia TX Volume down
Xperia T Volume down
Xperia SL Volume down
Xperia tipo dual Volume down
Xperia tipo Volume down
Xperia miro Volume down
Xperia go Volume down
Xperia acro S Volume down
Xperia neo L back key
Xperia sola Volume down
Xperia U Volume down
Xperia P Volume down
Xperia S Volume down
Xperia ION Volume down
Sony Ericsson Xperia PLAY back key
Sony Ericsson Xperia Arc back key
Sony Ericsson Xperia Arc S back key
Sony Ericsson Xperia neo V back key
Sony Ericsson Xperia neo back key
WT19i (live with walkman) back key
Sony Ericsson Xperia ray Volume down
Sony Ericsson Xperia mini Volume down
Sony Ericsson Xperia x8 back key
Sony Ericsson Xperia w8 back key
ပညာရေးဆိုင်ရာ Tablet နှင့် Classmate PC ကို Intel မိတ်ဆက်
Intel သည်ပညာရေးဆိုင်ရာ မျိုးဆက်သစ်ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Intel သည် Classmate PC ကိုနှစ် အတန်ကြာကတည်းက စမ်းသပ်လုပ်ကိုင် ၎င်းနှင့်အတူပညာရေးဈေးကွက်အတွက် ရည်မှန်ထားသော Tablet ကွန်ပျူတာသစ်ကိုလည်း မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Classmate PC အရွယ်မှာ ၁၀ လက်မခန့်ရှိပြီး ၎င်းတွင် Intel ၏ Celeron N2806 ပရိုဆက်ဆာနှင့် Windows 8.1 ကိုအသုံးပြုထားသည်။ ထို့အပြင် လှည့်နိုင်သည့် ကင်မရာနှင့် touchscreen display ကိုအသုံးပြုထားသည်။ အဆိုပါ ထုတ်ကုန်သည် Intel ကထုတ်လုပ်မည့် HP Classmate Notebook တွင်အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်ထားကြောင်း သိရသည်။ ၁၀ လက်မအရွယ်ရှိသည့် Intel ၏ပညာရေးဆိုင်ရာ Tablet တွင် Intel ၏ Z2520 CPU သည် 1.2 GHz အထိ စွမ်းဆောင်နိုင်ပြီး ၎င်း Tablet တွင် Android 4.2 ကိုအသုံးပြုထားသည်။ ၎င်းအပြင် Tablet တွင် stylus ပါဝင်သလို အရှေ့နှင့်အနောက်တွင် ကင်မရာများပါဝင်ပြီး 3G အသုံးပြုနိုင်ကာ ဘက်ထရီသက်တမ်းမှာ ၁၂ နာရီအထိ အသုံးပြုနိုင်သည်။ အဆိုပါ Tablet နှင့် Classmate PC တို့သည် အကြမ်းခံနိုင်ကာ ၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သော မှန်ဘီလူးများနှင့် အပူချိန်တိုးတာသည့် ကိရိယာများ ပါဝင်သောကြောင့် ကလေးများအနေဖြင့် သိပ္ပံကိုနားလည်ရန် အထောက်အကူ ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
-စိုးထက် Ref: Tomshardware
Credit : အင်တာနက်ဂျာနယ်
Samsung Galaxy Note3Firmwares
Maung Pauk at 1:31:00 AM 2
Note3အတွက် ဖန်ဝဲများကို ဒီမှာဒေါင်းယူပါ
++ SM-N900 ++
Galaxy SM-N900 Version 4.3 ( Thailand ) မြန်မာစာပါဝင်ပြီး
Galaxy SM-N900 Version 4.4.2 ( Thailand ) မြန်မာစာ မြန်မာစာစနစ်ပါဝင်ပြီး
ဒီလင့်နဲ့လဲ ဒေါင်းနိူင်ပါတယ် http://d-h.st/4L3
++ SM-N9005 ++
Galaxy SM-N9005 Version 4.3 ( Singapore ) မြန်မာစာ မြန်မာစာစနစ်ပါဝင်ပြီး
Galaxy SM-N9005 Version 4.4.2 ( Thailand ) မြန်မာစာ မြန်မာစာစနစ်ပါဝင်ပြီး
ဒီလင့်နဲ့လဲ ဒေါင်းနိူင်ပါတယ် http://d-h.st/1w6
++ SM-N900s ++
Galaxy SM-N900s Version 4.4.2 ( South Korea )
Credit to : DjjoeMan ( MMF )